भोलिदेखि हाँस्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम ‘कमेडी हब’ प्रसारण हुने, यस्ता छन् कलाकारहरु - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper भोलिदेखि हाँस्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम ‘कमेडी हब’ प्रसारण हुने, यस्ता छन् कलाकारहरु	भोलिदेखि हाँस्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम ‘कमेडी हब’ प्रसारण हुने, यस्ता छन् कलाकारहरु - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper भोलिदेखि हाँस्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम ‘कमेडी हब’ प्रसारण हुने, यस्ता छन् कलाकारहरु
काठमाडौं । हाँस्यकलाकार केदारप्रसाद घिमिरे माग्ने बुढाको निर्देशनमा रहने हाँस्यव्यङ्ग्य टेलिभिजन कार्यक्रम ‘कमेडी हब’ भोलि (जेठ ११ गते) बुधबारदेखि हरेक हप्ता प्रसारण हुने भएको छ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शोका विषयमा औपचारिक जानकारी गराइएको हो। युवाहाँस्यव्यङ्ग्यकलाकार राजाराजेन्द्र पोखरेलको परिकल्पना रहेको टेलिभिजन कार्यक्रम एपि वान बाट हरेक बुधबार बेलुका ८ बजे पश्चात आउने भएको छ। कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यसहित हाँस्यविधाका चर्चित कलाकारले यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे। कार्यक्रममा बोल्दै महजोडीले शोको सफलताको कामना दिए ।
अभिनेता दीपकराज गिरीले पछिल्लो समय नेपालमा हाँस्यव्यङ्ग्य विधालाई रुचाइन थालिएको बताए। अभिनेता मनोज गजुरेलले हँसाउनु, सामाजिक सन्देश र एकताको सन्देश दिनु कमेडीको उद्देश्य रहेको बताए।